တရားဓမ္မ – အခမဲ့
ဆွမ်းလှူရခြင်း အကျိုးတရား ငါးပါး
ဆွမ်းအကျိုးတရား ငါးပါး “ဘောဇနံ ဘိက္ခဝေ ဒဒမာနောဒါယကော။ပရိဂ္ဂဟ ကာနံ ပဉ္စဌာနာနိ ဒေတိ။ အာယုံဒေတိ။ဝဏံ္ဏဒေတိ။ သုခံဒေတိ။ဗလံဒေတိ။ပဋိဘာနံ ဒေတိ။(အင်္ဂုတ္တရ-စတုက နိပါတ်) “ဘိက္ခဝေ=သံသရာဘေး လာမည့်အရေးကို မျှော်တွေးငံ့ငြား အို ချစ်သားချစ်သမီးတို့” “ဘောဇနံ=ဤ ဆွမ်း ဘောဇဉ်တို့ကို” “ဒဒမာနော=ပေးလှူအပ်ကုန်သော” “ဒါယကော=ဒါယကာ တို့သည်” “ပဉ္စဌာနာနိ=ငါးပါးသောအကြောင်းတို့ကို” “ဒေတိ=ပေးလှူခြင်း မည်ပါပေ၏” ကတ မာနိပဉ္စ=ဤငါးပါးအကြောင်းတို့မည်သည်မှာ” “အာယုံ=အသက်ကို””ဒေတိ=ပေးလှူခြင်းမည်ပေ၏” …
တရားထိုင်ပုံထိုင်နည်း တရားထိုင်တဲ့အခါခါးကိုဖြောင့်ဖြောင့် မတ်မတ်ထား ရှေ့လည်းမငိုက်နဲ့၊ ဘေးလည်းမစောင်းနဲ့၊ ခေါင်းကလဲ ဘယ်ဘက်မှ မစောင်းပါနဲ့၊ ခါးအထက်ပိုင်း ကိုယ်ကြီးဟာ ရှေ့နာက်ဘေးယိုင်နေရင်၊ အရိုးအဆစ်တွေ အဆက်ချင်း တည့်တည့်မနေတဲ့အတွက် မကြာခင် နာလာလိမ့်မယ်။ ဝေဒနာကိုတွေ့ဖို့ရာထားပါဦး၊ သမာဓိရအောင်တောင် မထိုင်နိုင်ဘဲနေမှာစိုးရတယ်၊ ခါးအောက်ပိုင်းကလဲ သိပ်တင်းကြပ်ပြီး၊ ခြေထောက်ချင်းဖိမထားရဘူး၊ ဖိထားခဲ့လို့ရှိရင်သွေးလွတ်ကြော၊ သွေးပြန်ကြောတွေ ကိုက်ခဲလာမယ်။ ဒီတော့ထိုင်နည်းမမှန်ရင် ဝေဒနာကိုတမင်လုပ်ပြီး ယူရာကျမယ်၊ ဒီအချက်တွေဟာ …
အလှည့်ရောက်ရင် ကြိုမသိနိုင်သော သေခြင်းတရားရောက်လာမှာမို့ အပျော်မလွန်ကြူးပါနဲ့ဦး
ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အခါက ၁၅ ရက်အတွင်းသေတော့မဲ့ မင်းသမီးတပါးကို ဘုရားရှင်က ၁၅ ရက်အတွင်းသေတော့မယ်လည်းပြောလိုက်ရော ထိတ်လန့် ပြီး တရားဘာဝနာတွေ အားထုတ်သတဲ့။ သေမယ်ဆိုတာ မသိခင်ကတော့ သေဖို့ မေ့ပြီး ကာမဂုဏ်အာရုံနဲ့ ပျော်ပါးနေလိုက်တာ သေမယ်လည်းပြောရော ဘာမှ မလုပ်တော့ပဲ ။ဒါန သီလ ဘာဝနာ နဲ့ ပဲ နေ့ စဉ်အားထုတ်ပြီး အချိန်ကုန်ခဲ့သတဲ့။ သြော် …
” ရဟန်းသံဃာ မိမိအိမ်​သို့ကြွလာရာ၌’လာဘ်​ကြီးငါးပါး’ ရယူနည်း”
” မြတ်​ဗုဒ္ဓက ရဟန်းသံဃာများမိမိအိမ်​သို့ ကြွ​ရောက်​လာလျှင်​ လာဘ်​ကြီး ငါးပါးရ​ကြောင်း ​အောက်​ပါအတိုင်း​ဟောကြား​တော်​မူခဲ့ပါသည်​။ “ရဟန်းတို့” သီလရှိ​သောရဟန်းတို့ကြွ​ရောက်​လာ​သောအခါ အိမ်​၌- ဒါယိကာတို့သည်​ အ​ကြောင်းငါးမျိုးတို့ဖြင့်​ များစွာ​သော​ကောင်းမှုကို တိုး ပွား​စေကုန်​၏။ အဘယ်​အကျိုးငါးမျိုးနည်းဟူမူကား…. ၁။ သီလရှိ​သောရဟန်းသည်​ မိမိအိမ်​သို့ကြွသည်​ရှိ​သော်​ လူတို့ကိုမြင်​၍ စိတ်​ကြည်​လင်​ (ရုံမျှဖြစ်​) ​သောအခါ ထိုအိမ်​ရှင်​သည်​ နတ်​ပြည်​​- ​ရောက်​​စေ​သော အကျင့်​ကိုကျင့်​သည်​မည်​​ပေ၏ ။ ၂။ …
ဘုရားပြုပြင်ရန် သိန်း၁၀၀၀ မတည်လိုက်သည့် ဘုရားဒကာ အလှူရှင် ဇနီးမောင်နံ သိန်း၁၀၀၀ လှူတယ်ဆိုလို့ မြို့က သူဌေးကြီး လို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့.
ဘုရားပြုပြင်ရန် သိန်း၁၀၀၀ မတည်လိုက်သည့် ဘုရားဒကာ အလှူရှင် ဇနီးမောင်နံ သိန်း၁၀၀၀ လှူတယ်ဆိုလို့ မြို့က သူဌေးကြီး လို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့. ဘုရားပြုပြင်ရန် သိန်း၁၀၀၀ မတည်လိုက်သည့် ဘုရားဒကာ အလှူရှင် ဇနီးမောင်နံ သိန်း၁၀၀၀ လှူတယ်ဆိုလို့ မြို့က သူဌေးကြီး လို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့….. တောတောင် ထဲ မှာ ကိုယ်တိုင် ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပြီး …
“မိဘခြေရာ တောင်းယူလိုသူများအတွက်” မိဘခြေရာခံယူနည်း
မိဘခြေရာခံယူနည်း မိဘခြေက္ခဏာ ခံယူပွဲသည် မြန်မာတို့၏ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ အလေ့အထ တစ်ခုဖြစ်၍မြန်မာ မိသားစုတိုင်း ခံယူကျင့်သုံးသင့်ပါသည်။ကျေးဇူးရှင် မင်းကွန်းဆရာတော် ဘုရားကြီးနှင့်ကုံလုံ ဆရာတော် ဘုရားကြီးတို့၏မိဘခြေရာ တောင်းယူပူဇော်နည်းမှာအောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။မိဘခြေရာ တောင်းယူသောနေ့ဟာမိဘရော သားသမီးတွေပါ မင်္ဂလာရှိသောမွေးနေ့ (သို့မဟုတ်) မွေးရက်နှင့်မှတ်တမ်းအပ်သည့်နေ့များတွင်ကျင်းပလျှင် ပို၍ကောင်းမွန်၏။မိဘခြေရာတောင်းယူ မည့်အချိန်မှာမိဘကော သားသမီးပါ ရေချိုးသန့်စင်ပြီးသန့်ရှင်းသောအဝတ်များ ဝတ်ဆင်ပြီးဘုရားစင် ရှေ့မှာထိုင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူမျိုးတွေမှာအရပ်လေးမျက်နှာ၊အရပ်ရှစ်မျက်နှာ၊အရပ် ဆယ်မျက်နှာရှိတဲ့ အထဲမှအထက်အရပ်ရပ်ကို …
သီတဂူဆရာတော် ဦးဥာဏိဿရ (၁၉၃၆-) မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၉၈ – ခု၊ တပါင်းလပြည့်နေ့၌ အဖ ဦးမောင်ညို၊ အမိ ဒေါ်သန်းတင်တို့က ပဲခူးတိုင်း၊ ပြည် မြို့နယ် စီရင်စု၊ သဲကုန်းမြို့နယ် ပုတီးကုန်းမြို့တွင် ဖွားမြင်သည်။ အသက်(၇)နှစ်အရွယ်တွင် သဲကုန်းမြို့တပ် အလယ်တန်းကျောင်းတွင် စတင်ပညာသင်ကြားခဲ့။ အသက်(၁၅)နှစ်အရွယ်တွင် ရှင်သာမဏေပြုခဲ့။ သက္ကရာဇ်-၁၃၁၈ – (သာသနာနှစ်-၂၅၀၀ ပြည့်နှစ်) …
သင့်ကို လူချစ်လူခင်ပေါစေမယ့် အလွယ်ကူဆုံး မေတ္တာပို့နည်း
သင် နံနက် အိပ်ယာထလို့ မျက်နှာသစ်တော့မယ် ရေကို စကိုင်ပြီးဆိုတာနဲ့ ဗုဒ္ဓံသရဏံ ဂစ္စာမိဆိုပြီး တစ်ခါရွတ် မျက်နှာကို ရေနဲ့ တစ်ခါသပ်ချ .. အဲ့လိုဘဲ ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္စာမိဆိုပြီး တစ်ခါရွတ် မျက်နှာကို ရေနဲ့ တစ်ခါသပ်ချ .. သံဃံ သရဏံ ဂစ္စာမိဆိုပြီး တစ်ခါရွတ် ရေနဲ့ တစ်ခါသပ်ချပါ .. (ဆိုလိုတာကတော့ …
ပုဂံ ရွှေစည်းခုံဘုရားသပိတ်များအထဲ ကွမ်းသွေးထွေးသူများရှိ
ပုဂံ ရွှေစည်းခုံဘုရားသပိတ်များအထဲ ကွမ်းသွေးထွေးသူများရှိလာကြောင်း ဒေသခံများကပြောကြားသည်။ ဒီဟာက အမှိုက်တောင်းမဟုတ်ပါဘူး… ဘုရားပွဲမှာ ကောက်ပဲသီးနှံ၊ ဆွမ်းကပ်တဲ့ သပိတ်ပါ မလုပ်သင့်ပါဘူး… ဗျာ ပြည်တွင်းဘုရားဖူးများအနေဖြင့် ပုဂံဒေသသို့ နွေကျောင်းပိတ်ရက်အတွင်း အများအပြားဝင်ရောက်လာရာ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ် ကြောင်း သိရသည်။ Photo MinMinAung (Bagan) ရန်ကုန်သတင်းစာမျက်နာများ Unicode ပုဂံ ရှစေညျးခုံဘုရားသပိတျမြားအထဲ ကှမျးသှေးထှေးသူမြားရှိ ပုဂံ …
ပင်းတယမြို့ ကျက်သရေဆောင် ရှေးဟောင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင်ဘုရား
ရှေးဟောင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင်ဘုရား ရှေးဟောင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင်ဘုရားသည် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း တောင်ကြီးခရိုင် ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ပင်းတယမြို့မြောက်ဘက် ၃ မိုင်ခန့် အကွာ တွင်တည်ရှိပါသည်။ ရှစ်သောင်းလေးထောင်ဟု အမည်တွင်ရခြင်းမှာ ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်လေးများမှာ ရှစ်သောင်းလေးထောင်တိတိ ကျောက်သားနံရံတွင် ကပ်ကာ တည်ထားသော စေတီဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်.အခုတော့ ရာသီဥတု ဘေးဒဏ်ကြောင့် ရှစ်သောင်းလေးထောင် အပြည့်မရှိတော့ပါ။ သက်တမ်းအား ဖြင့် နှစ်ပေါင်းကိုးဆယ်ကျော်ကြာမြင့်ပြီဖြစ်၍ …